Kuratidza zvinyorwa neelebheri Greta
Greta Thunberg, hapana zita rakazara Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg (* Ndira 3, 2003, Stockholm), muSweden mamiriro ekunze. Yakawana kuzivikanwa kwepasi rese nemabasa anoenderera mberi kutsigira chiito chekurumidza kupokana nekudziya kwepasirese kwakatanga muna 2018 aine makore gumi nemashanu.
Thunberg yakapa mukana weChishanu yeRamangwana kufamba kwakatanga munaNovember 2018. Mabasa ake ega akatanga muna Nyamavhuvhu 2018 pamberi peSweden Riksdag (Paramende) muStockholm pasi pegwaro Skolstrejk för klimatet (chikoro mamiriro ekunze) , iyo yaida kukwezva kutarisa zvakanyanya kumatambudziko ekushanduka kwemamiriro ekunze. Kunyangwe Sweden pachezvavo yakatora "mutemo wakanyanya wemamiriro ekunze munyika" sekureva vezvematongerwo enyika, vachiti nyika haifanirwe kutora kabhoti panosvika 2045, yakaratidza kuti nyika yakapfuma seSweden inogona kuita zvakawanda kuchengetedza mamiriro ekunze.
Mukati merimwe sangano rakatangwa naGreta Thunberg, wepasi rose…